Archive du 20161203
Kolonely Lylison Voasava trano indray
Nidina vao maraina teny Ambohipo misy ny toeram-ponenan�ny kolonely Lylison ny mpitandro filaminana omaly tokony ho tamin�ny 5 ora.
Lalatiana Ravololomanana Miantso ny IGE hanadihady ao amin�ny CUA
Nanizingizina omaly ny mpanolotsaina monisipaly Lalatiana Ravololomanana fa tsy manara-dal�na sy tsy mangarahara ny fitantanam-bola ao amin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Raharaha Ambohimahamasina Avotra ny praiminisitra
Avotra tamin�ny ora farany ny praiminisitra lehiben�ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly, taorian�ny fivoahan�ny didim-pitsarana ny alakamisy teo mikasika ilay raharaha tetikasa fanamboarana tranobe ao amin�ny kaominin�Ambohimahamasina.
Vovonan�ny Kristianina Malagasy Manana kandida ho filoham-pirenena
Tsy azo lambolamboina ny raharaham-pirenena fa mila kristianina tena sahy mijoro amin�ny maha kristianina azy. Izay no ventin-kevitra nentin-dry zareo avy eo anivon�ilay Vovonan�ny
Taratasin�i Jean Miditra amin�ny tsy tokony hidirana
Manakory Jean a ! Elaela tsy hita ianao a ! Nahagaga fa dia nipoitra indray omaly. Dia tsy mba mahay miteny mihitsy ve ianareo raha tsy hanakorontana e ?
Volabe 6,4 miliara dolara Hampandrosoana ny firenena tokoa ve ?
Nifarana omaly ny fikaonan-dohan�ny mpitondra Malagasy sy ny mpamatsy vola nandritra ny roa andro tany Paris, renivohitra Frantsay.
Rufin Rakotomaharo Voatendry ho Talen�ny seraseran�ny CUA
Notendrena ho talen�ny serasera ao amin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) tamin�ity herinandro ity ny mpanao gazety, Rufin Rakotomaharo.
FAMINDRANA LOVA MAIMAIMPOANA Mitombo isa ny olona voasarika aminy
Nitombo avo roa heny ireo olona tonga nanatona ny sampandraharaha sahaniny mahakasika ilay famindrana lova maimaimpoana karakarain�ny fitondram-panjakana, araka ny fanazavan�Andriamatoa Hasimpirenena, tale jeneralin�ny fananantany, omaly.
Kolikolin�ny eny amin�ny fitsarana Tarazon'ny afera eny amin'ny oniversite
Vao miditra taona voalohany eny amin�ny anjerimanontolo dia efa malaza ny kolikoly sy ny serasera ara-bola, ka tsy mahagaga raha voasokajy ho lohalaharana amin�ny fanaovana kolikoly ny mpitsara eto amintsika.
ANALOGH Hanangana trano 400 manomboka amin�ny 2017
Trano fonenana miisa 400 indray no kasain�ny ANALOGH ( Agence National d�Appuie au LOGement et Habitat) hatsangana manomboka amin�ny taona 2017 ho avy io.
Mpiasan�ny CNFPPSH Manana fahasembanana ny 70%
Mahavita ny asa ampandraiketana azy avokoa ireo mpiara-miasa amiko izay manana fahasembanana ny 70%, hoy ,
OLONA MANANA OLANA ARA-PIHAINOANA Latsaky ny 1 % ireo voakarakara
Mbola latsaky ny 1 %-n�ireo olona manana olana ara-pihainoana eto amintsika no fantatra fa misy mandray an-tanana toy ny asa tanterahin�ny AKAMA ( Akanin�ny Marenina ) etsy 67 ha ankehitriny.
Tsipy kanetibe Tafakatra amin�ny dingana manaraka ny Malagasy
Niatrika ny fifanintsanana isam-bondrona toy ireo mpifaninana rehetra ny ekipam-pirenena Malagasin�ny taranja tsipy kanetibe amin�ny fiatrehana ny lalao fiadiana ny ho tompondaka eran-tany faha-47 tontosaina eto Madagasikara nanomboka ny alakamisy 1 desambra teo.
Federasion�ny Fanatanjahantena an-tsekoly Naseho ampahibemaso tetsy Anosy ireo mpikambana
Naseho ampahibemaso ho fantatry ny besinimaro omaly, tetsy amin�ny trano fivorian�ny MEN etsy Ampefiloha, ireo mpikambana hitantana ny rafitra Federasion�ny Fanatanjahantena an-tsekoly (F�d�ration Omnisports Scolaire de Madagascar).
Tsara raha manaja tena�
Sanganehana ny rehetra nandre ny fanambaran�ny Filoha Frantsay Fran�ois Hollande, herinandro taorian�ny niverenany avy eto Madagasikara.